Adobe Capture: Sawir adduunka ka turjuma oo u turjuma lambarro midab leh | Abuurista khadka tooska ah
Waxyi ayaa meel walba ka jira oo nooc kasta oo soo jeedinno ah ayaa hareeraheenna ku jira mar walba. Ma aqaano inay waligeed kugu dhacday inaad wadada tagto oo aad wax la kulanto: qof, daaqad dukaan, dhisme ama boorar aad si lama filaan ah u dareento loo waxyooday oo ay saamayn ku yeelatay habka loo isku daro walxaha, midabada ama qaababka. Waxaad isla markiiba dooneysaa inaad ku shaqeyso midabadaas laakiin macquul ahaan ma lihid aragti raajo lagumana ogaan karo sida saxda ah ee aad ugu baahan tahay codadka la isticmaalay. Waxaad sawir ka qaadaysaa sheyga su'aasha ku jirta iyo kumbuyuutarkaaga oo leh muraayad indho-indheyn ah oo lagaa qaadayo shay-baarayaal midabbadaas ah si aad isla markaaba ula shaqeyso. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanta hooska ee aad ka hesho sawirka (macquul ahaan) waa mid aan xad lahayn oo helitaanka xalka muhiimka ah iyo xalka weyn ee aad aragtay waxay qaadataa shaqo.
Haddii tani kuguula muuqato adiga, waxaan haystaa war wanaagsan maxaa yeelay Adobe Qabsashada CC waxay kaa caawin kartaa si dhakhso leh. Codsigan waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad naftaada u hurto inaad sawirro ku qaadatid aaladdaada moobiilka ah oo aad bilowdo inaad u beddesho wax kasta oo kugu xeeran oo ku saabsan mowduucyada midabka, burushyada iyo Waxay u egtahay in dabcan aad ku dhexgeli karto naqshadahaaga. Maaha wax cajiib ah?
Qabsadaan waxyaalaha yaabka leh ee adduunka oo aad iyaga la qaabeyso
Hawlgalku waa sahlan yahay, sawir ayaad ka qaadaysaa oo waxaad ka beddeleysaa taleefankaaga gacanta. Intaa waxaa sii dheer, Adobe Capture CC wuxuu na siinayaa suurtagalnimada in aan sahamino kumanaan sawir oo Adobe Stock ah oo aan helno rukhsadaha u dhigma Codsigan waxaad ku abuuri kartaa mawduucyo midab leh laakiin sidoo kale waxaad sawir ugu beddeli kartaa burush tayo sare leh, tan waxaad u baahan doontaa oo keliya fartaada ama, haddii aad ku guuldareysato, Qalinka Apple. Sidoo kale, haddii aad ka shaqeyso Sketch waxaad toos uga bilaabi kartaa Qabashada barnaamijkan waxaadna abuuri kartaa buraash si toos ah uga dhex muuqan doona aaladdaada.
Capture CC wuxuu kaloo noo ogolaanayaa inaan u beddelno walxaha ku jira sawirradeenna qaabab vectorized ah, tan awgeed waxay ku filnaan doontaa helitaanka sawirkeenna oo aan u adeegsanno farta si aan u dhammaystirno qaabka shayga la sheegayo oo wadarta saxda ah iyo xitaa wax laga beddelo muuqaalkeeda. Haddii ay adiga kugu habboon tahay, waxaad sidoo kale ka bilaabi kartaa Qabashada CC Sawirka Sawirka si aad u awooddo inaad isla markiiba ugu adeegsato nashqadahaaga.
Waxa ugu weyn ee tan ku saabsan ayaa ah in barnaamijku uusan kaliya diirada saareynin ka shaqeynta qaabab istaati ah laakiin sidoo kale sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa deegaanka fiidiyowga. Abuuritaanka Muuqaallada waxaan ku dabaqi karnaa midabkeenna iyo qaababkeenna mashruucyada fiidiyowga si dhakhso leh oo dareen leh.
Waxyaabaha macquulka ah ayaa ah in markii aad sawir qaadatid oo aad sameysatid mawduucyadaada iyo burushyada aad rabto inaad la shaqeyso Waxaad ku sameyn kartaa qaab aad u fudud oo fudud adoo ku kaydin kara faylashaada Maktabadaha Hal-abuurka ah ee 'Cloud Cloud Libraries' si aad dhakhso ugu hesho labadaba barnaamijyada desktop-kaaga iyo barnaamijyada mobilada. Intaas waxaa sii dheer, waxaad la wadaagi kartaa dhammaan maktabadahaaga kombuyuutarkaaga desktop si toos ah Capture.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka jeclahay badeecadaha ugu dambeeya ee Adobe ay bilaabayaan ayaa ah fududaan iyo garashada is-dhexgalku inuu shaqeeyo. Xaaladdan oo kale, Adobe Capture CC wuxuu soo bandhigayaa shaashad kala qaybsan oo noo oggolaanaysa inaan si dhakhso leh u helno dhammaan dejimahayaga iyo hantideena iyada oo aan laga tegin bogga weyn oo aan isweydaarsano mid kasta oo ka mid ah aragtiyaha. Waad ku mahadsan tahay, way fududahay in lala shaqeeyo dhowr codsi isku mar iyo isla shaashad.
Shaki la'aan, codsi aan kugula talineyno halkan haddii aadan xasillooneyn oo aad isku daydo inaad ka hesho dhiirigelin dhacdo kasta ama dhacdo kasta. Waxa ugu fiican ee ku saabsan waa in ay gebi ahaanba bilaash tahay oo sidoo kale loo heli karo labadaba macruufka iyo Android ee iTunes iyo Google Play App Store. Waxaad ka heli kartaa Isbaanish, iyo sidoo kale Jarmal, Shiine, Kuuriyaan, Czech, Daanish, Daanish, Faransiis, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan, Holand, Noorweey, Polish, Boortaqiis, Ruush, Iswidhish iyo Turki. In kastoo nidaamkaagu waa inuu lahaado shuruudo si uu u taageeri karo arjiga Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah adoo booqanaya bogga rasmiga ah isku xirka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Capture: Sawir adduunka oo loo turjumaa lambarro midab leh
Jilayaasha Star Wars waxaa dib loogu sawiray Winnie the Pooh iyo saaxiibbadiis